इस्पात प्लेट 5mm हाइड्रोलिक कतरन मिसिन काटने को लागि प्रयोग गरे - Bambeocnc
मोडेल संख्या: हाइड्रोलिक क्यान्सर मिसिन
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): 3140X1740 एक्स 2040 मिमी
प्रमाणीकरण: CE आईएसओ, सीई र आईएसओ
नाम: हाइड्रोलिक कटनिंग मिसिन
काट्ने सामाग्री: धातु शीट, इस्पात प्लेट, स्टेनलेस स्टील प्लेट, आदि।
नियन्त्रण प्रणाली: E21S (DAC310, DAC360 वैकल्पिक)
रङ: निलो (वैकल्पिक)
वारंटी:2वर्ष,2वर्ष
पूरा संरचना र विशेषताहरु को मिसिन:
1. सबैतया यूरोपीय डिजाइन, सुव्यवस्थित खोज, फ्रेम: दाँया र बायाँ पर्खाल बोर्डहरू, कार्य तालिका, तेल बक्स, स्लट इस्पात र आदि समावेश हुन्छन्। वेल्डेड भागहरूको तनाव कम्पनले सफा गर्न सकिन्छ। मेशिनले उच्च सटीकता र उच्च शक्ति पाउँछ र सजिलैसँग ढुवानी गर्न सकिन्छ।
2. कत्तिको बीम भित्री ढालिएको ढाँचामा डिजाइन गरिएको छ, यो प्लेटहरू घटाउन सजिलो छ र उत्पादनको शुद्धता पनि ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ।
- उच्च सटीकता, उच्च दक्षता, सरल र सुविधाजनक अपरेशन, राम्रो प्रदर्शन, अनुकूल मूल्य र उत्तम सेवा।
- यूरोपीय संघ सीई प्रमाणीकरण र आईएसओ गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणीकरण द्वारा मिसिन।
ए हाइड्रोलिक प्रणाली:
1. समायोजित हाइड्रोलिक नियन्त्रण प्रणाली, अधिक विश्वसनीय र सजिलो लागि सजिलो। हाइड्रोलिक प्रणालीमा मोटर, तेल पम्प र वाल्व समूहहरू हुन्छन् र यसलाई तेल बक्सको माथि स्थापित गरिन्छ।
2. हरेक पूरा कार्य चक्र हाइड्रोलिक वाल्वको नियन्त्रण मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ। रिमोट समायोजन वाल्वले दीवार बोर्डको दाहिने छेउमा काम गर्ने दबाब समायोजन गर्न सक्दछ।
3. सिलेंडरमा सबै सील आयात गरिन्छ, सबैभन्दा प्रसिद्ध ब्रान्ड, राम्रो गुणस्तर र उच्च प्रदर्शन।
4. ओवरलोड ओवरफ्लो सुरक्षा हाइड्रोलिक प्रणालीमा आउटफिस्ट गरिएको छ, जुन कुनै रिसार्जको आश्वासन दिन सक्छ, र तेल स्तर पढ्न सकिन्छ वा सीधा हेर्न सकिन्छ।
B. नियंत्रण प्रणाली काटन:
1. यस मशीनिंग उपकरण को काटने को समय MD11-1 NC या Estun E10 NC मा प्रदर्शित गरिन्छ र ब्लक साइज र नम्बर डिस्प्ले को सही तरिका मा कट दिखाते हो।
2. पानाको समानांतरता कटौती गर्न र क्यान्सर साइजको परिशुद्धता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। कट स्ट्रोक र कट समय पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
3. लाइट संरेखण उपकरण काटने को लागि रेखाचित्र रेखा, स्टैंडर्ड फ्रंट समर्थन पत्रक फ्रेम, मानक ब्लेड को एक सेट।
4. प्रणालीले सहायक ऊर्जाको रूपमा ब्लडेर-हाइड हाइड्रोलिक संचितता प्रयोग गर्दछ, दबाव झिकेर अवशोषित गर्दछ, मेशिन चिकनी, कम आवाज चलिरहेको छ।
C. ब्लेड परिशुद्धता समायोजन र कटौती:
1. ब्लेड क्लीनरलाई द्रुत रूपमा र सही ढंगले समायोजन गर्न ह्यान्ड-व्हील समायोजन गर्नुहोस्, सेयरिंगमा सेयरिंग, छाया-रेखा काट्ने।
2. काटिएको किनाराहरूसँग लामो जीवनको विशेषता आयताकार मोनोब्लेड ब्लेड, गुणस्तर उच्च-कार्बन उच्च क्रोम ब्लेड D2 गुणस्तर।
3. कोणलाई परिवर्तन गर्न चर छ, जसले पानाको धातुको क्यान्सर विरूपण घटाउन सक्छ र धेरै मोटो पाना मेट्न सक्छ।
डी अग्रिम प्रविधि र प्रक्रियाहरु:
1.Optional: होल्यान्ड डीमलेम DAC350, DAC360, DAC310 वा Estun E200 सीएनसी नियन्त्रक स्वत: ब्याकगाजलाई नियन्त्रण गर्दछ, स्ट्रोक काटेर, कोण र ब्लेड अंतरले स्वचालित रूपमा कार्यपुस्तकहरूको संख्यालाई साथमा नियन्त्रण गर्दछ।
2. इरेपियन प्रमुख इलेक्ट्रोनिक्स र हाइड्रोलिक वाल्व राम्रो विश्वसनीयता संग उन्नत अभिन्न हाइड्रोलिक प्रणाली - जर्मनीबाट आयोत।
यसका लागी एक अर्काको अनुहारमा एक अर्काको ज्यान गएको छ।
ई। बिजुली प्रणाली र सुरक्षा अनलक:
3. रिजर्भेसनले सुरक्षाको लागि मेशिन र खुट्टा स्विचमा रोक्छ र बाड जस्तै शरीरको गार्ड मानक हो वा प्रकाश पर्दा विकल्प वैकल्पिक छ।